कसले गर्‍यो जुत्ताको आविष्कार? | Ratopati
कसले गर्‍यो जुत्ताको आविष्कार?
मानव सभ्यतामा जुत्ताले फेशनको रुप लिएको पाइन्छ
प्राचीन कालमा शिकार गर्ने क्रममा आदिमानवहरुले नांगो खुट्टाले नै ढुंगाहरुको भूमिमाथि, बन जंगल तथा डाँडा काँडातिर हिँड्डुल गर्न तथा दौडनु पर्ने हुन्थ्यो । त्यसरी नांगो खुट्टाले हिँड्दा, दौड्दा ढुंगा तथा काँडाले घोचेर अति नै पीडा दिन्थ्यो । त्यसैले आदिमानवहरुले आफ्नो खुट्टालाई ढुंगा– काँडाहरुले घोचिनबाट जोगाउनको लागि खुट्टालाई ढाक्नुपर्ने महसूस गरे । त्यसका लागि उनीहरुले घाँसको मुठो, काठको टुक्रा, भुत्लायुक्त छाला जस्ता कुराहरुलाई खुट्टामा बाँध्न थाले । यो नै जुत्ताको प्राचीन रुप थियो ।
खासमा यो प्राचीन जुत्ता आधुनिक जुत्ताजस्तो नभएर चप्पलजस्तो आकारको थियो । पैतलामा बाक्लोगरी घाँस, काठको टुक्रा वा भुत्ला भएको छाला राखेर त्यसलाई खुट्टाको औंलाहरु तथा गोलीगाँठातिर बानिन्थ्यो । गर्मी क्षेत्रमा बस्नेहरुका लागि त यो ठीकै थियो तर जाडो क्षेत्रमा बस्नेका लागि यो पर्याप्त थिएन, त्यसले खुट्टालाई चिसोबाट जोगाउदैनथियो । त्यसैले चिसो क्षेत्रमा बस्ने ती प्राचीन मानिसहरुले सोही पदार्थमा थपथाप गरेर खुट्टाको अझ माथिसम्म ढाक्न थाले । यसरी विस्तारै चप्पल जुत्ताको रुपमा विकास हुन थाल्यो ।
यो त भयो प्राचीन युगका मानिसहरुको कुरा । पछि मानव सभ्यताको विकास भएपछि जुत्ता बनाउने पहिलो मानव इजिप्टवासी थिए । तिनीहरु छालाको प्याड वा पेपीरस नामक विरुवाको प्याडलाई जुत्ताको रुपमा प्रयोग गर्ने गर्दथे । यो प्याड दुई वटा पट्टीले खुट्टामा बाँधिएको हुन्थ्यो । औंलाहरुलाई जोगाउनका लागि यस्ता जुत्ताहरुमा कहिँलेकाही माथितिर मोडिएको पनि हुन्थ्यो ।
इजिप्टवासीहरुभन्दा अझ अगाडि बढेर रोमनहरुले जुत्तालाई अझ विकसित तुल्याए । रोमनहरुले बनाएको जुत्तालाई calceus भनिन्थ्यो । यो जुत्ताको पछिल्लो छेउमा खुट्टा घुसार्ने खुला भाग हुन्थ्यो भने अगाडि चाहिँ औला छिराउने भाग राखेर गाँठो पारिएको हुन्थ्यो । रोचक त के छ भने, त्यसबेला समाजका विभिन्न वर्गहरुलाई लगाउनका लागि भिन्न भिन्न किसिमका calceus को डिजाइन गरिएको हुन्थ्यो ।
उता चीसो क्षेत्रका वासिन्दाहरुले चाहिँ भिन्नै किसिमका जुत्ताहरु अलग्गै विकसित गरे । उदाहरणको लागि, तिनीहरुले घाँसबाट बनाइएको गद्दादार प्याड भएको थैलो आट्टनो खुट्टामा घुँडासम्म बाँध्ने गर्थे । खुट्टा ढाक्ने यही थैलो समयकालमा पछि गएर एस्किमो तथा आदिवासीहरुले लगाउने जुत्ताको रुपमा विकसित हुन पुग्यो ।
आधुनिक जुत्ताको जन्मदाताको श्रेय चाहिँ योद्धा वर्गहरुलाई जान्छ । योद्धा वर्गहरु लडाईं गर्ने क्रममा लामो यात्रामा जानुपर्ने हुन्थ्यो । यस अवस्थामा आफ्नो खुट्टा जोगाउनको लागि उनीहरुललाई लामो समयसम्म टिक्ने जुत्ता बनाउनु पर्ने जरुरत आइलाग्यो । यही जरुरतले पछि गएर टिकाउ, बलियो र आकर्षक हुने छालाको जुत्ता जन्मिन पुग्यो । यस्ता जुत्ताहरु पहिले इटाली, फ्रान्स र इंग्ल्याण्डमा देखापरे ।
मानव सभ्यतामा जुत्ताले फेशनको रुप लिएको पाइन्छ । उदाहरणको लागि, इंग्ल्याण्डमा सम्राट जेम्स प्रथमको पालामा अग्लो हिल र छोटो छाला भएको जुत्ताको फेशन समाजमा चलेको थियो । वास्तवमा हिँड्डुल गर्नको लागि उक्त जुत्ता अप्ठ्यारो थियो, तर मानिसहरु चल्तीको फेशन भएकोले उक्त जुत्ता लगाउन रुचाउँथे । अग्लो हिल भएका जुत्ताहरु देखापर्नुभन्दा पहिले छोटा हिल भएका जुत्ताहरु पनि समाजमा फेशनको रुपमा प्रचलित थिए । जुत्ता बनाउने कारखाना चाहिँ सबैभन्दा पहिले अमेरिकामा सन् १६२९ मा देखापर्‍यो । त्यसबेला थोमस वियर्डले घुमन्ते कोलनीको लागि जुत्ता बनाउने ठेक्का लिएका थिए ।
स्रोतः Tell Me why
Title Photo: http://www.stylishandtrendy.com
जापान बन्यो विश्वकै सबैभन्दा शक्तिशाली देश